Macdanta King Sulaymaan (qaybta 20), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Macdanta Boqor Sulaymaan <abbr> (qaybta 20)
Haweeney carmal ah oo duug ah ayaa aadeysa suuqa weyn ee degmada. Tani wax gaar ah maahan sababta oo ah waxay ka dukaameysataa halkaas wax badan, laakiin maanta ma noqon doonto sida dadka kale oo dhan. Markay ku riixeyso gaari-wadashadeeda gantaal, nin qurux badan oo labbisto ayaa u yimid iyada, gacanteeda ruxaya oo tiri: "Hambalyo! Waad guuleysatay Iyagu waa macaamiisheena kunka ah waana sababtaas tan ay ugu guuleysteen kun Euro! » Gabadha yareyd ee yari aad bay u faraxsan tahay. "Haa" wuxuu dhahay: »oo hadaad rabto inaad kordhiso macaashkaaga, waa inaad i siisaa oo keliya 1400 euro - lacagta khidmadda - macaashkaaguna wuxuu kordhi doonaa ilaa 100.000 oo euro. Waa hadiyad! 70-jir ayeeyadii ma rabto inay seegto fursadan cajiibka ah waxayna tiri: "Lacag badan iguma haysto, laakiin si dhaqso leh ayaan gurigayga ugu tagi karaa oo waan ku heli karaa". Laakiin taasi waa lacag aad u badan. Miyaad ka fikiri kartaa haddii aan kuu kaxeeyo gurigaaga si aad u hubiso inuusan wax kugu dhicin? Sayidku wuxuu weyddiistaa.
Waxay u maleyneysaa inyar, laakiin markaas waa oggolaatay - intaas ka dib, waa Masiixi ah, Ilaahayse uma oggolaanayo wax xun inay dhacaan. Ninku sidoo kale waa nin xushmad iyo dabeecad wanaagsan, oo ay jeceshahay. Waxay ku noqdaan gurigoodii, laakiin waxaa soo baxday in aysan lacag ku filan haysan guriga. "Maxaan u aado bangigaaga oo aan lacagta kala soo baxno?" "Gaarigeygu wuxuu kusii jeedaa geeska, ma sii dheerayn doono." Way oggolaatay. Lacagtii ayuu bankiga kala baxay oo wuxuu siiyaa Sayid. Hambalyo! Daqiiqad i sii Waan tegi doonaa oo ka heli doonaa jeegaaga gaariga. » Runtii maahan inaan kuu sheego sheekada inteeda kale.
Waa sheeko dhab ah - marwada weyn waa hooyaday. Madaxa ayaad isaga ruxaysaa si la yaab leh. Sidee ayay u noqon kartaa qof xanaaq badan? Markasta oo aan sheekadan u sheego, waxaa jira qof isaguna khibrad la mid ah u leh.
Dhamaan qaababka iyo cabirkooda
Inteena ugu badan ayaa waligood helnay emayl, farriin qoraal ah ama taleefan wicitaan ah si aan ugu hambalyeeynno guusha. Waxa kaliya oo aan sameyno si aan u helno faa'iidada ayaa ah inaan wadaagno macluumaadka kaararka deynta. Iskudayyada noocan oo kale ah ee ah in la khiyaaneeyo waxay ku yimaadaan dhammaan qaababka, midabbada iyo cabbirkooda. Markaan qorayo ereyadan, xayeysiis TV wuxuu bixiyaa cunno mucjiso ah oo balan qaada calool fidsan maalmo gudahood. Wadaad ayaa kaniisadiisa ku dhiirrigeliya inay cunaan cawska si ay ugu dhowdahay Ilaah koox koox Masiixiyiin ah ayaa markale isu diyaarineysa soo laabashada Masiixa.
Markaas waxaa jira emails loo yaqaan 'silsiladaha silsiladaha: "Haddii aad ugu dirto emaylkan shan qof shanta daqiiqo ee soo socota, noloshaada si dhaqso ah ayaa loogu kobcin doonaa shan qaab." ama "Haddii aadan isla markiiba u soo gudbin e-maylkan toban qof, nasiibdarro baad ku jiri doontaa toban sano."
Maxay dadku ugu dhacaan dhibbanayaasha sabuuraddan oo kale ah? Sidee ayaynu u noqon karnaa xukun dheeri ah? Salomon wuxuu inaga caawinayaa Maahmaahyadii 14,15: »Qof aan wax garaneyn ayaa weli wax walba rumeysan; laakiin nin caqli leh ayaa socodsiiya socodkiisa. Noqoshada aan la fahmi karin waxay la xiriirtaa sida aan u wajaheyno xaalad gaar ah iyo nolosha guud ahaan.
Waxaan aamini karnaa wax badan. Waxaan ku qancin karnaa muuqaalka dadka. Waxaan noqon karnaa daacadnimo iyo aaminsanaan in kuwa kale ay daacad noo yihiin. Tarjumaadda marinka Kitaabka Quduuska ah ayaa sidan u dhigeysa: "Ha noqon doqon oo rumeyso wax kasta oo aad maqashid, caqli yeelo oo ogow halka aad u socoto". Markaa waxaa jira Masiixiyiin rumeysan haddii ay aaminaad ku filan Ilaah uun wax walba u fiicnaan doonaan. Iimaanku waa wanaagsan yahay, laakiin rumaynta qofka khaldan waxay noqon kartaa musiibo.
Waxaan dhawaan arkay sawir dhejis ah oo ka baxsan kaniisada oo leh:
"Ciise wuxuu u yimid inuu dembiyadeenna inaga qaado, ma aha maskaxdeenna." Dadka caqliga leh ayaa u malaynaya. Ciise qudhiisa ayaa yidhi, "Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan." (Mark 12,30).
Waxaa jira qodobo kale oo loo baahan yahay in laga fiirsado: Kalsoonida xad dhaafka ah ee awoodda wax lagu fahmo, xukumo, iyo dabcan hungurigu sidoo kale door weyn ayuu leeyahay. Mararka qaarkood rumaystayaasha si fudud waxay u gaadhaan go'aanno furuuruc oo kama fikiraan cawaaqibka. “Way soo daahay isbuuca soo socda. Markaa qof kale ayaa lahaan doona, in kastoo aan aad u rabay. »Qorsheynta qof mashquul ah ayaa keena wax badan; laakiin haddii aad dhaqso wax u qabatid, uma baahnaan doontid » (Maahmaahyadii 21,5).
Immisa guur oo adag ayaa ka bilowda lammaane qofka kale ku boorinaya inuu guursado si ka dhakhso badan siduu isagu ama iyadu doonayo? Inaad ka garowdo xalka Sulaymaan waa fududahay: waqti u hel si aad u eegto ugana fikirtid ka hor intaadan go'aan gaarin:
Ka fikir waxyaalaha kahor intaadan ficil sameyn. Dad aad u tiro badan ayaa aamminsan fikradaha caqligalka inay yihiin fikrado macquul ah.
Weydii su'aalo. Weydii su'aalo hoosta ka soo dhacaya oo kaa caawiya inaad fahanto.
Caawimaad raadso. Meeshii aan talo jirin, dadku waa halligmaa; laakiin meesha ay joogaan la taliyayaal badan, caawimaad ayaa laga heli karaa » (Maahmaahyadii 11,14).
Go'aannada muhiimka ah marna ma fududaan. Had iyo jeer waxaa jira dhinacyo qotodheer oo qarsoon oo dusha sare dusha sare ah oo u baahan in la helo lana tixgeliyo. Waxaan u baahanahay dad kale oo naga caawiya khibradooda, khibradooda iyo caawimaad wax ku ool ah.
Macdanta Boqor Sulaymaan (Qaybta 20aad)